UMark Dean, umsunguli we-Black-American we-IBM PC - i-Afrikhepri Fondation
UMsombuluko, Mashi 8, 2021
UMark Dean, umsunguli we-Black American we-IBM PC
NUzalelwe eJefferson City, eTennessee ngoMashi 2, 1957, uMark Dean uthole ukuthi impumelelo yayisebenza emithanjeni yegazi lakhe. Umkhulu wakhe wayenguthishanhloko futhi ubaba wakhe esebenza njengomphathi weDam Tennessee Valley Authority. Ingane ekhanyayo nenomdlandla, wayevame ukubekezelela imibuzo evela kofunda nabo esikoleni samabanga aphansi, ebuza ukuthi ngabe wayemnyama ngempela yini ngoba abaNsundu abavamile akufanele ngabe bahlakaniphe kangako. UMark wayengumdlali owaziwayo wesikole samabanga aphakeme futhi wayengumfundi oqondile. Impumelelo yakhe yaqhubeka ekolishi, njengoba waqeda okokuqala ekilasini lakhe nge-BS kwi-Biology ku-Electrical Engineering evela e-University of Tennessee ngo-1979.
Ngo-1980 uDean wamenywa ukuba ajoyine i-IBM njengonjiniyela. Ngaphandle kwesikhundla sakhe esisha, uqhubekile nemfundo yakhe wathola iziqu ze-master kwezobunjiniyela kagesi eFlorida Atlantic University ngo-1982. Njengonjiniyela we-IBM, akuthathanga sikhathi kwaba negalelo elikhulu, wakhonza konjiniyela omkhulu Okweqembu elithuthukise i-IBM PC / AT, ikhompyutha yangempela yasekhaya / yehhovisi. Nge uzakwabo Dennis Moeller, wahlakulela Bus lwekhompiyutha (ISA) izinhlelo, i-elementi ukuthi avunyelwe kumadivayisi amaningi ezifana modems futhi amaphrinta ixhunywe PC, okwenza PC i ezingabizi, ichopho elula of the ikhaya noma ihhovisi lebhizinisi elincane. U-Dean uzoba ne-patent ayisishiyagalolunye yesishiyagalolunye eyakhelwe kuwo wonke ama-PC. UDean ulandelwe ngamamodeli we-PS / 2 angama-70 noma angama-80, kanye ne-adaptha yemidwebo yombala (eyenza ukuthi kubonakale umbala ku-PC)
Naphezu kwempumelelo yakhe enkulu, uDean wabona ukuthi kuningi okwakufanele kufundwe futhi kungaphezu kwalokho ayengakufeza, ngakho-ke wangena eStanford University ngo-1992 futhi wathola iziqu zobudokotela. kwezobunjiniyela kagesi. Eminyakeni emihlanu kamuva, wamiswa njengomqondisi we-Austin Research Laboratory kanye nomqondisi wokuthuthukiswa kobuchwepheshe beqembu le-IBM Enterprise Server. Ngaphansi kobuholi bakhe, e1999, ithimba lakhe lenze inqubekela phambili eminingana ebonakalayo, kufaka phakathi ukuhlola i-gigahertz microprocessor yokuqala emhlabeni ye-CMOS. Ngale mpumelelo enkulu, waqokwa njengePhini Likamongameli Wezinhlelo Zokucwaninga e-IBM's Watson Research Center eYorktown Heights, eNew York, ngaleso sikhathi njengePhini Likamongameli we-IBM's Storage Technology Group, wagxila amasu wezinhlelo zokugcina kanye nobuchwepheshe imephu yomgwaqo yenkampani. Wabe eseqokwa njengephini likamongameli wehardware nezinhlelo zokwakhiwa kweqembu le-IBM's Systems and Technology (STG) eTucson, Arizona, ekugcineni waba yiphini likamongameli we-IBM's Almaden Research Center eSan UJose, eCalifornia.
Ngaphezu kweziqu ezihlonishwayo ezinemithwalo yemfanelo yokuzalwa, uDkt. Uzalo lwase-Afrika luyahlonishwa). Ngo-1997, kanye nomngani wakhe uDennis Moeller, wangeniswa eNational Inventors Hall of Fame (Ithempeli elinamalungu angaba ngu-150) kwathi ngo-2001 wakhethwa njengelungu leNational Academy of Engineers. Njengoba kunegunya lobunikazi be-40 noma amalungelo obunikazi, uDkt Dean uzimisele ukuqhubeka nomthelela omkhulu emhlabeni wezesayensi nasemakhaya nasemsebenzini.
isigaba ABANTU ABAKHULU ABAKHULU NABASEBENZI
Yithi yebo ekuchumeni - Louise Hay (Audio)
Sifihla iqiniso mayelana namaphilisi okukhulelwa avela ku-1975
Buka i-Lumumba (2000)